अचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक Share गर्नुस ;अधुरो काम बन्नेछ। – Khabar PatrikaNp
अचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक Share गर्नुस ;अधुरो काम बन्नेछ।
August 11, 2020 365
एजेन्सी – यो संसार धेरै रहस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अचम्म लाग्ने घटनाले मानिसहरुलाई चकित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ ।
एउटा रहस्यमय ढुङ्गाको माथिबाट लगातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ ।यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ ।
स्थानीयहरुले यसलाई दैवी चमत्कार मान्छन् । उनीहरुको मान्यता के छ भने यो आगो उतिखेर निभ्ने छ जब धर्तिमा महाप्रलय आउनेछ ।यो आगोलाई हेर्न मानिसहरु टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् ।
यो आगोको बारेमा भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धान पनि गरेको छ ।
खोजपछि वैज्ञानिकहरुले ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन् । सोही कारण आगो निरन्तर बलेको हुनुपर्छ ।
गाजर तपाईंलाई कतिको मन पर्छ ? यदी मन पर्दैन भने पनि मन पराउन थाल्नुहोस् । गाजरका फाइदा यति धेरै छन कि तपाईंले नखाइ धरै पाउनु हुन्न ।
नियमित गाजर खानेका लागि यो स्वादिलो पनि छ । सलाद होस् वा अचार वा तरकारी । जे सुकैको रुपमा खाए पनि गाजरले जिउलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्दछ ।
गाजर नियमित खानुका फाइदा यी हुन्:
· रक्तअल्पताको समस्या भोगिरहेकाहरुका लागि गाजरको नियमित सेवन रामवाण बन्दछ । गाजरले शरीरमा रगतको उत्पादन बढाउँछ । यसमा भिटामिन ए, बी, सी, डी, इ तथा के समेत पाइन्छ । काँचो गाजर खानाले रजश्वलाका क्रममा हुने दुखाई पनि कम हुन्छ । त्यस्तै भिटामिन ए भरपूर हुनाले गर्दा आँखाको ज्योति तेज पार्नमा पनि सहयोग गर्दछ र रतन्धोबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
· गाजरको नियमित सेवनले रगतलाई बढि गाढा हुनबाट रोक्दछ । जसका कारण मुटुरोगको जोखिम कम हुन्छ । मुटुको चाल अनियमित हुने समस्या भएकाहरुले पर्याप्त मात्रामा गाजर खाँदा फाइदा पुग्दछ ।
· नियमित रुपमा गाजर खानाले खोकी, दम तथा पिसाब पोल्नेजस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सहयोग मिल्दछ । गाजर खानाले स्वासनलीमा जमेको खोकी बाहिर निकाल्न समेत मद्दत पुग्दछ ।
· तपाईंलाई धेरै पाद आइरहने समस्या छ ? यदि त्यसो हो भने एक कप गाजरको रसमा दुई चम्चा काउलीको रस मिलाएर पिउनुहोस् । त्यसले ग्यास आइरहने समस्याबाट मुक्ति दिलाउछ ।
· गाजरमा पर्याप्त एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । त्यसले यसको नियमित सेवनले छाला स्वस्थ तथा चमकदार बन्नुका साथै ढल्कँदो उमेरको नकारात्मक असर पनि कम गर्दछ । साथै यसले क्यान्सरजन्य रोगहरुको जोखिम पनि कम गर्दछ ।
Prevबाङ्गेमुढामा पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला
Nextजब एक स्कुलका ७ शिक्षिका एकैपटक गर्भवती भए…पुरा पढ्नुहोस
लक्ष्मी माताको ! कृपा यी संकेत देखिएभने सम्झनुहोस् तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुन्छ
भोली कार्तिक ०२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
यी राशी भएकाहरुको पैसा कहिले जोगिन्न,आजै अपनाउनुहोस यी उपाय नत्र सारा सम्पती खरानी बन्नेछन।
मनोकामना माइले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक ०२ गते । आईतबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ?हेर्नुहोस राशिफल पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नुहोस
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29758)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28413)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27864)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24699)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22277)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20982)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15612)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14961)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13631)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13317)
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला…..? थाहा पाउनुहोस
अरिंगालले टो’केर एकै घरका ५ वर्षीया मनिषा र ३ वर्षीया सृजनाको मृ’त्यु
बाउले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु: दुई भाई सिडियो, ४ भाई हाकिम !
दुखद खबर:सरकारी अस्पतालमा एकैपटक ११ शिशुको मृत्यु,स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए राजीनामा, पुरा पढ्नुहोस
सकियो नक्साको कहानी, प्रधानमन्त्रीओलीले भारतसँग न्यानो सम्बन्ध यसरी बनाए